रेफ्रीको निर्णयप्रति नेयमारको आपत्ती ! | Hamro Khelkud
रेफ्रीको निर्णयप्रति नेयमारको आपत्ती !
पेरिस (एजेन्सी)– पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) का सुपर स्टार नेयमारले म्यानचेस्टर युनाइटेडविरुद्धको अन्तिम १६ को दोस्रो लेगको हारलाई सामान्य लिन सकेनन् ।
बुधबार राती भएको खेलमा युनाइटेडसँग ३–१ ले पराजित भएसँगै पिएसजी च्याम्पियनन्स लिगबाट बाहिरिएको छ । युनाइटेडको मैदानमा भएको पहिलो लेग पिएसजीले २–० ले जितेको छ । तर, टोली घरेलु मैदानमा भने कमजोर रह्यो । ब्राजिलियन स्टारले अफिसियलको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
इन्जुरी समयको चौथो मिनेटमा प्राप्त पेनाल्टीलाई मार्कोस रासफोर्डले गोल गरेपछि युनाइटेडले पिएसजीको मैदानमा ३–१ को जित निकाल्यो । ३–३ को बराबरीपछि अवे गोलका आधारमा युनाइटेड क्वार्टरफाइनल पुग्न सफल रह्यो । युनाइटेडको जित अविश्वसनिय रह्यो ।
त्यसमाथि युनाइटेडलाई दिइएको पेनाल्टी विवादित बनेको छ । भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्री (भिएआर) को साहायतामा प्राप्त पेनाल्टीलाई गोलमा परिण गर्दै युनाइटेड अघि बढेको थियो । डिओगो डालोटले प्रहार गरेको सट प्रेस्नेल किम्पेम्बेको हातमा लागेर फर्केपछि भिएआरको साहारामा पेनाल्टी दिएका थिए । नेयमारको नजरमा भने त्यो पेनाल्टी दिएन ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत रेफ्रीको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । ‘यो साच्चा निराशाजनक भयो । त्यहाँ चार जना मान्छे खटाइएको छ ,जसलाई फुटबलबाट बारेमा केहि थाहा छैन । उनीहरु पेनाल्टीका लागि भारको प्रयोग गर्छन्, उनले भनेका छन्, त्यो पेनालटी थिएन । त्यो कसरी ह्यान्ड बल भयो । जबकी पछाडिबाट बलले लागेको छ ।’ नेयमारले अपशब्दको पनि प्रयोग गरेका छन् ।
पिएसजीले आफ्ना सुपर स्टारलाई महत्वपूर्ण खेलमा पक्कै पनि मिस गर्यो । नेयमार चोटका कारण केहि समय यता मैदान बाहिर छन् । यो हारपछि टोलीका प्रशिक्षक थोमस टुचेलको भविष्यमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ ।
घरेलु मैदानमा झन्डै दशक यता एक क्षत्र राज गर्दै आएको पिएसजीले युरोपियन च्याम्पियनसिपमा भने सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्यसहित टोलीले गत सिजन नेयमारसँगै फ्रान्सेली स्टार केलियन बाप्पेलाई भित्राएको थियो ।